Claudine sy Lalao : Mpanavakavaka ny Bianco -
AccueilRaharaham-pirenenaClaudine sy Lalao : Mpanavakavaka ny Bianco
10/11/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Fantatra nanditra ny valan-dresaka nataon’i Lalatiana Ravololomanana fa fitoriana faharoa napetrany ho an’i Lalao sy Marc Ravalomanana no nateriny androany tetsy amin’ny biraon’ny Bianco omaly. Ny volana Jolay 2017 ny fitoriana voalohany kanefa tsy nisy tohiny dia izao nametraka fitoriana faharoa izao indray ny tenany. Manodidina ny fitantanam-bola ao anivon’ny CUA no vontoatin’ny fitoriana araka ny resaka nataon’ity mpanolontsainan’ny tanàna ity tamin’ny mpanao gazety, izany hoe, volam-bahoaka.
Nanaitra ny sain’ny mpanara-baovao ny filazan’i Lalatiana Ravololomanana fa fitoriana faharoa iny napetrany omaly iny. Koa nahoana àry no tsy nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety tahaka ny raharaha Claudine Razaimamonjy ny Bianco? Nahoana no tsy nosamborina eny an-dalambe, nandefasana mpitandro filaminana mitovy tamin’ny nataon’ny Bianco teny Mahamasina? Miandry ny SMM hanao valan-dresaka sy hangataka ny hisamborana an’i Lalao sy Marc Ravalomanana ihany koa araka izany ny mpanara-baovao satria samy volam-panjakana no voatohintohina tamin’ny raharaha Claudine sy ny fitoriana napetrak’i Lalatiana Ravololomanana teny amin’ny Bianco.
Tsy mazava mihitsy araka izany ity Bianco ity, indrindra ny tale jeneraliny. Miendrika fanavakavahana mantsy ny fihetsika ataony eo amin’ny fanatanterahana ny asany. Nahoana no nenjehana sy nanaovana izao fomba rehetra izao ny tompon’ny A&C, nandikàna sy nanitsakitsahana ny tsiambaratelon’ny famotorana kanefa nodian-tsy hita sy nafenina tamin’ny vahoaka ny fisian’ny fitoriana momba an’i Lalao sy Marc Ravalomanana? Voalaza ao amin’ny lalàna tsara izao fa endrika kolikoly ny fanomezana vahana manokana (favoritisme). Moa va tsy izany no ataon’ny tale jeneralin’ny Bianco amin’izao raharaha Ravalomanana mivady izao?